कोरोना महामारीका बाबजुद भारतका १०० धनीको सम्पत्ति १४ प्रतिशत बढेर ५१७ अर्ब डलर पुग्यो, कसको कति ? - Arthapage
कोरोना महामारीका बाबजुद भारतका १०० धनीको सम्पत्ति १४ प्रतिशत बढेर ५१७ अर्ब डलर पुग्यो, कसको कति ?
प्रकाशित मितिः २४ आश्विन २०७७, शनिबार ११:२० October 10, 2020
एजेन्सी । कोरोना भाइरस महामारीले भारतमा ठूलो असर गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । अमेरिका पछिको विश्वको दोस्रो बढी संक्रमित हुने मुलुक भारत भएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न जारी बन्दाबन्दी ९लकडाउन० ले गएको जुनमा भारतको आर्थिक विस्तार २४ प्रतिशत खुम्चिएको छ । यसका बाबजुद पनि भारतका १०० जना धनाढ्याको सम्पत्ति १४ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ ।
भारतमा १३ वर्षदेखि मुकेश अम्बानी सर्वाधिक धनीको सूचीमा पर्दै आएका छन् । महामारीका बीचमा मुकेशको सम्पत्ति ७३ प्रतिशत बढेर ८८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको फोब्र्सले जनाएको छ । यसअघि उनको सम्पत्ति ३७ अर्ब ३० करोड डलर मात्र थियो ।
भारतमा लकडाउनका बाबजुद उनको कम्पनी रिलायन्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको सेयर मूल्य बढेपछि उनको सम्पत्ति थपिएको हो । यसबीचमा अम्बानीले जीओ प्लेटफर्मको स्वामित्व बिक्री गरी २० अर्ब डलर थपेका छन् । उनले फेसबुक, गुगल, सिल्भरलेक, केकेआर जस्ता ठूला इक्विटी कम्पनीहरूलाई भारतमा भित्र्याएका छन् ।
यस्तै सर्वाधिक धनीको दोस्रो सूचीमा इन्फास्ट्रक्चर म्याग्नेट गौतम अडानी रहेका छन् । लकडाउनकै बीचमा उनको सम्पत्ति बढेर २५ अर्ब २० करोड डलर पुगेको छ । अडानी भारतका एयरपोर्ट किङ हुन् । मुम्बई एयरपोर्टको ७४ प्रतिशत स्वामित्व उनको छ । सो एयरपोर्ट भारतकै दोस्रो ठूलो हो ।
कसको कति रु यहाँ क्लिक गर्नुहोसhttps://www.forbes.com/india-billionaires/list/#tab:overall
अर्का धनाढ्या टेक टाइकुन शिव नादार हुन् । उनी एचसीएल टेक्नोलोजिज्का अध्यक्ष पनि हुन् । गत जुलाईमा उनका छोरी रोशनी नदार मल्होत्रा २० अर्ब ४० करोड डलर सम्पत्तिसहित भारतको तेस्रो धनी व्यक्तिको सूचीमा परेकी छिन् । उनको सेयर मूल्य बढेपछि तेस्रो स्थानमा चढेकी हुन् ।
विश्वमा स्वास्थ्य संकट बढी रहेका बेला भ्याक्सिन अर्बपति साइरस पुनवालाको सम्पत्ति बढेको छ । उनका छोरा आधारले नेतृत्व गरेको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया अहिले कोभिडको खोप बनाउन लागेको छ । उनको सम्पत्ति २६ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको फोब्र्सले जनाएको छ । धेरै कमाउनेमा बाइकनका संस्थापक किरन मजुम्दार स रहेकी छिन् । उनको सम्पत्ति दोब्बर बढेर ४ अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ ।
चौथो नम्बरमा रिटेल इन्भेस्टर्स राधाकृष्ण दामिनी छन । उनको कुल सम्पत्ति १५ अर्ब ४० करोड डलर पुगेको छ । हिन्दुजा ब्रदर्सको १२ अर्ब ४० करोड डलर रहेको छ ।
यो वर्ष नयाँ ९ जना धनी थपिएका छन् । जसमध्ये इन्फो एज इन्डियाका सहसंस्थापक सञ्जीव विकचन्दानी, डिस्काउन्ट अफ स्टक ब्रोकेज जोरधाह ब्रोकिङ, भिनाटी अर्गानिजका सहसंस्थापक विनोद सरार्फ, एसआरएफ ब्रदर्शका अरुण भारत राम र आरती इन्डष्ट्रिजका चन्द्राकान्ता र राजेन्द्र गोरी रहेका छन् । धनीका सूचीमा रहेका किशोर वियानीले ऋणको पासोमा परेपछि फिर्चर्स ग्रुप रिलायन्सलाई बिक्री गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २४ आश्विन २०७७, शनिबार ११:२० |
Prevदानाको मूल्यवृद्धिका कारण अण्डा उत्पादनमा ४०५ गिरावट, दैनिक ३० लाख गोटा मात्रै उत्पादन
Nextबलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै युवायुवती सडकमा